Operatera mpizahatany India: Ahoana ny fomba ahazoana 400 tapitrisa dolara amin'ny fanondranana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Operatera mpizahatany India: Ahoana ny fomba ahazoana 400 tapitrisa dolara amin'ny fanondranana
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Mpandraharaha fizahan-tany India amin'ny fivorian'ny minisitra
Soso-kevitra marobe no nomen'ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany (IATO) karana nandritra ny fivoriana iray natolotry ny minisitry ny Varotra sy ny indostria, Shri Piyush Goyal, mba hakana hevitra avy amin'ireo mpanondrana momba ny fepetra takiana tokony horaisina amin'ny antson'ny PM hampitombo ny fanondranana. 400 tapitrisa dolara amerikana tamin'ity taona ity ary hitondra an'i India ho amin'ny toe-karena 5 tapitrisa dolara amerikana amin'ny ho avy.
Ny fepetra toy ny fanokafana visa e-mpizahatany sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fiasan'ny sidina iraisam-pirenena mahazatra dia teo an-tampon'ny lisitra.
Nangatahana ihany koa ny tokony hanohizan'ny drafitra fanondranana entana avy any India mandritra ny 5 taona ho avy ary ho tafiditra ao anatin'ny drafitra RoDTEP amin'ny politikam-barotra ivelany.
Ity tetik'asa ity dia kendrena amin'ny famerenana amin'ny laoniny ireo mpanondrana, ny haba, ny haba, ary ny haba aloany any amin'ny foibe, ny fanjakana ary ny eo an-toerana.
Misolo tena ny indostrian'ny fizahantany, Rajiv Mehra, filohan'ny Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany indianina (IATO), sosokevitra naroso toy ny fanokafana visa e-mpizahatany, famerenana amin'ny laoniny ny asa sidina iraisampirenena mahazatra sns. Nampahafantariny ny Minisitra koa ny toe-bola tsy mampidi-doza izay nolalovan'ireo mpandraharaha mpizahatany nandritra ny areti-mandringana sy ny fomba famoahana ny SEIS efa ela (Fanondranana entana avy any Scheme India) ho an'ny taom-bola 2019-20 dia tena ilaina amin'ny fiveloman'izy ireo.
Ankoatr'izay dia nangataka Andriamatoa Mehra ny amin'ny tokony hanohizana ny drafitra fanondranana entana avy any India mandritra ny 5 taona ho avy ary tokony ampidirina ao amin'ny tetika RoDTEP amin'ny politikam-barotra ivelany natao ho 2021-26. Ity tetik'asa ity dia kendrena amin'ny famerenana amin'ny laoniny ireo mpanondrana, ny haba, ny haba ary ny haba aloany any amin'ny faritra afovoany, fanjakana ary eo an-toerana, ary manodidina ny roa ampahatelony, 65% amin'ny fanondranana ny firenena no entiny.
Ny filoha IATO koa dia nanambara tamin'ny minisitra fa ny indostrian'ny fizahantany dia mpamatsy vola vahiny lehibe ary araka izany dia tokony homena ny satan'ny mpanondrana heverina ho mpifaninana amina mpandraharaha fanondranana entana. Ny hetsika toy izany dia afaka manatsara ny fifaninan'izy ireo manoloana ireo firenena mifanila aminy hafa ary afaka manatsara ny fahatongavan'ireo mpizahatany vahiny, hoy izy nanamafy.
Ankoatr'izay, nangatahan'ny minisitry ny Varotra sy ny indostria ny hisian'ny fampiharana ny lalàna momba ny hetra Integrated Goods and Services (IGST) izay ananan'ireo mpizahatany miala an'i India manana ny famerenana ny vidin'ny IGST aloa any India amin'ny entana nalaina avy tany India. eo ambanin'ny tetik'asa Tax Refund for Tourists (TRT).
Nilaza Andriamatoa Mehra, “Raha ny ambaratonga lehibe kokoa dia manana tanjaka fizahan-tany goavana i India, saingy mba hanatrarana izany dia mila fanohanan'ny governemanta amin'ny famporisihana ara-bola izahay ary koa fanatsarana fotodrafitrasa ara-batana. Miompana amin'ny fanatsarana ny hakanton'i India ny governemanta, azoko antoka fa hahita fipoahana [izay] tsy mbola hitantsika hatrizay. ”